Meheradda Crunchbase ee Iibinta: Aqoonsiga, Soo Dejinta, iyo Iswaafajinta B2B Xogta Fekerka | Martech Zone
Jimcaha, Agoosto 28, 2020 Jimcaha, Agoosto 28, 2020 Douglas Karr
Shirkadaha adduunka oo dhan waxay ka faa'iideystaan Crunchbase xogta si loo kobciyo keydkooda macluumaadka ganacsi, loo hubiyo nadaafadda xogta wanaagsan, loona siiyo kooxaha iibkooda helitaanka macluumaadka shirkadda ay u baahan yihiin si ay u ogaadaan fursadaha.
Crunchbase ayaa bilaabay cusub Isdhexgalka Salesforce ee dhammaan isticmaaleyaasha Crunchbase taas oo u oggolaan doonta shakhsiyaadka iyo kooxaha iibka yar yar inay si dhakhso leh u ogaadaan una dhaqaajiyaan rajooyinka tayada sare leh.
Cusboonaysiintaani waxay ku soo beegantay wakhti qaas ah oo muhiim u ah dadka wax iibiya - oo leh Shirkadaha 80% si firfircoon u sahaminaya siyaabo ay ugu beddelaan xeeladahooda suuqa-tegidda kuwa dhijitaalka ah, iyo 32% dadka go’aanka gaara isagoo dhahaya waxay u badan tahay in isbeddelada la xiriira faafa ee habab iibka ay halkan joogaan.
Isku-dhafkan, adeegsadayaasha Crunchbase mar dambe uma baahnaan doonaan inay waqti qaali ah ku qaataan sidii ay gacanta ugu dhoofin lahaayeen rajada laga qabo Crunchbase ee loo yaqaan CRM. Isdhexgalka Salesforce ee Crunchbase Enterprise wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku kobciso dhammaan diiwaanada xisaabaadka cusub ee jira ee Salesforce oo ay la socdaan xogta maareynta & xogta dhaqaale ee Crunchbase (taasi waa 40 + meelaha xogta).
Crunchbase ilaa Astaamaha Salesforce
Ka tag cilmi baarista si aad ugu fidiso dhowr guji: Miirayaasha raadinta Crunchbase, ku lammaaneeyey khibrad shirkadeed oo cusub u oggolow isticmaalayaasha inay wax ka bartaan shirkad gaar ah, ogaadaan rajooyinka, oo ay toos ugu kaydsadaan Salesforce.
Diirada saar iibinta, maahan gelitaanka xogta: Eeg rajooyinka iminkaba ku jira Salesforce oo iska ilaali nuqul celinta. Markay isticmaaleyaashu helaan oo ay badbaadiyaan rajo cusub oo ka timaadda Crunchbase ilaa Salesforce, macluumaadka shirkadda aasaasiga ah ee loogu baahan yahay in lagu shakhsiyeeyo gaadhista ayaa sidoo kale la badbaadiyaa
Lahaada rajada ay kaydinayaan: Loolan adag oo dhex mara dadka wax iibiya, caqabadda ugu horreysa ayaa inta badan sheegata rajo. Rajo kasta oo isticmaale ka kaydiyo Crunchbase ilaa Salesforce waxay ku hoos qoran tahay magacooda.
Dadka wax iibiya waxay halgan ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen macaamiil mustaqbal leh oo wali haysta awood iibsasho inta lagu jiro hoos u dhaca dhaqaale. Waqti qaali ah ayey ku bixinayaan raadinta iyo u qalmida hoggaamiyeyaal cusub, muddo dheer ka hor intaysan xitaa u dirin emayl fidin bilow ah. Isdhexgalkayaga cusub ee Salesforce wuxuu dadajiyaa geedi socodka sahaminta iyada oo la mideynayo qalabka raadinta Crunchbase iyo keydka macluumaadka shirkadda ee kooxaha iibka shaqooyinkooda jira. Hadda, dadka wax iibiya waxay si dhakhso leh ugula jaan qaadi karaan akoonnada cusub ee ay ka heleen Crunchbase si toos ah CRM-kooda. Iyo, si fudud u arag xisaabaadka Crunchbase ee ka maqan tusaale ahaan iibkooda Salesforce, sidaa darteed waxay ogaan karaan koontooyin aan cidina kooxdooda weli sheegan.
Arman Javaharian, Madaxa Wax soo saarka Crunchbase
Crunchbase sidoo kale dhawaan waxay soo bandhigtay a dib u habeyn buuxda ku sameyso astaamaha shirkadda iyada oo dulmarka tabku dulmarayo qodobbada xogta ee muhiimka ah ee ka caawiya dadka wax iibiya si deg deg ah
Fahmaan waxa shirkaddu qabato iyo xaaladdooda koritaan.
Falanqee waxqabadka shirkadda macluumaadka maaliyadeed oo ay ku jiraan wadarta maalgelinta iyo soo iibsiga.
Qod faahfaahinta si aad u go'aamiso haddii shirkaddu ay ku habboon tahay baahidooda iyada oo loo marayo macluumaad qoto dheer oo ku saabsan tikniyoolajiyadda shirkadda, qiyaasta dakhliga, dadka, iyo calaamadaha koritaanka.
Waxbadan Ka Baro Crunchbase ee Ganacsiga
Afeef: Douglas waa aasaasihii Highbridge, a Iskaashiga iibka
Tags: b2bcrunchbasefirmographicxoog -iibsi
Birdie: Cilmi-baarista Suuqa ee AI